HDD - imishini ubuchwepheshe. Ovundlile kokuqondisa Drilling
Gasket zokuxhumana imigqa Engagement indlela ezivamile kudinga imishini ekhethekile, breaking afanayo precoat ezingeni ithebhu. Futhi, ovundlile imishini ohlangothini (HDD) luqondiswe indlela Trenchless ukwakha isiteshi noma shaft, esiqhutshwa ipayipi noma ikhebula. Yiqiniso, isicelo kuleli cala, ukufakwa wenziwa eziyinkimbinkimbi nezobuchwepheshe ngaphezulu imisebenzi kanye zidinga amandla nezindleko. Nokho, zikhona izinzuzo eziningi bathethelele indlela HDD. imishini ubuchwepheshe ngaphandle kokudala ulwelwesi emseleni ivumela ukuxhumana endaweni lapho ukubhujiswa ebusweni inhlabathi akuvunyelwe. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezindaweni zasemadolobheni, kodwa le ndlela ka imishini akugcini lapho.
ulwazi olujwayelekile mayelana nobuchwepheshe
Amasu Drilling umugqa ovundlile kuyinto ukwakheka Borehole-indlela ukusika inhlabathi wokubhoboza emincane. Okungukuthi, ukubeka inhloko ukusebenza is busuka emathunjini omhlaba ngendlela yokuthi ngaphansi komhlaba lapho kuhlelwe wokuxhumana igcina ubuqotho bayo. Indlela evamile ovundlile imishini ubuchwepheshe kanye ukusebenza umsiki amathuluzi. Lokhu kancane sokuprakthiza ne Transmitter kanye wotho. Ludala ikhanda umshayeli imishini, kulandele uhlelo lokulawula Kwenziwa yibona ababenza umsebenzi omningi ngokushintsha wellbore kumiswa imingcele kuye nezidingo zephrojekthi.
Umsebenzi omningi kwenziwa ngaphambi kokuqala imishini. Ochwepheshe ukutadisha izakhiwo kanye inhlabathi izinga, indawo, ukuxhumana isebenze nokunye. D. ephenya ngokuthengwa mass inhlabathi ne ukubhaliswa nezinye izikhungo komhlaba uyisinyathelo esibalulekile ekulungiseleleni, ngemva kwalokho ungaqala imishini ovundlile ohlangothini. Technologies ukuqapha empambana kungenzeka wemizila ebekwe ekhona ukuxhumana Iphrojekthi ayikwazi kuphela yokuxazulula le nkinga yokwemukela umsebenzi, kodwa futhi ukucacisa amaqhinga engcono trajectory of the ukwakhiwa kahle.
Ukulungisa imishini nemingcele
Ubunzima eyinhloko hlobo okunjalo imishini akuyona ukubhujiswa mechanical inhlabathi, futhi ekugcineni ngakwesokudla isiqondiso kancane umsebenzi. isilawuli ikhanda yaqaphela kahle isikhundla salo kanye izindiza mpo futhi enezingqimba. Athutha, lo msebenzi wenziwa ngokusebenzisa ikhebula nezimo. Omunye ukuphela eqondiswa ekupheleni induku sokuprakthiza kanye nezinye kulawulwa opharetha we HDD eziyinkimbinkimbi. imishini ubuchwepheshe futhi inikeza kungenzeka ekwandiseni kahle kakade kuqedile. Ukuze lo msebenzi, inhloko imishini esikhundleni Rimmer - idivayisi eyenza umsebenzi olwandisa isiteshi nomphumela ohlukile. Ngokushintshanisa inhlangano kushaft yakha Ubukhulu obudingekayo, ngokuhudula nalo ipayipi.
Kuphatfwa ngemphumelelo inqubo imishini akunakwenzeka ngaphandle kokusebenzisa uhlelo ukusebenza izindawo ikhanda. Ngenxa isikhundla ngqo umqhele is azinakwa zibukeke, ubonelela uhlelo lokuqapha ekhethekile, okuyinto futhi uyakucabangela indlela HDD. Indlela nobuchwepheshe amadivayisi yesimanje kwemithombo ovundlile, ngokukhethekile, ezihilela ukusetshenziswa radar iphenya. Lokhu nemishini ekhethekile yokuthungatha etholakala ingxenye sokuprakthiza ikhanda.
Ukuxhumana opharetha probe inikezwa yi ukuvumelanisa iyunithi. Ngakho, umsebenzisi ungakwazi ukulandelela indawo sokuprakthiza, ukubhalisa ulwazi mayelana isiqondiso sayo, engela kanye lokushisa. Iqoqo lezi kanye neminye imininingo Kuphoqelekile, njengoba ikuvumela ukuba uvikelekile ngokuphelele ovundlile ohlangothini imishini. ubuchwepheshe Traditional ukwakha imithombo ngokuvamile isinikeza ithuba ukulawula ikhanda ngaphandle ukusetshenziswa kwamadivaysi ukuskena. Kodwa kulokhu, iyunithi usebenza ezindaweni sisithole, ngakho ukulahlekelwa ukulawula kungaholela emiphumeleni ezingalindelekile.
Izingxube Flushing kanye nezixazululo
Ukusebenza Rig kuncike kakhulu izinga wokugeza izixazululo esetshenziswa. Ngokwesibonelo, inhlanganisela enjalo kungandisa ijubane sokuprakthiza, ngcono inqubo ukuphepha ngisho nethonya elizuzisa isimo kwemvelo endaweni lomcimbi. Kuze kube manje, izixazululo nge izingxenye ukuthi ukuvimbela odla ukufakwa HDD esetshenziswa ngempumelelo. imishini ubuchwepheshe kuhilela ukusetshenziswa izingoma, okuhlanganisa izithasiselo okugcotshwayo polymer izinhlayiya, fillers, ekuthuthukiseni nokuhuzuka t. d., futhi ingxube ethandwayo bentonite, okuyizinto zokupheka lula.
Imishini iphepha zisetshenziswa, ehlanganisa amabhlogo eziningana sokusebenza. imishini Standard sihlinzekela khona ekumisweni, enomzimba Uhlaka, amandla isitshalo, sesondlo kwezixazululo emifula, control panel, njll .. Ukuhlukanisa Phakathi eziyinkimbinkimbi yenzeka inqola imishini, okungase emelelwa izakhiwo ezahlukene, ingasaphathwa amakhanda nezilandiso. Njengoba for ukusebenza, ubuchwepheshe HDD liphakathi izinkomba zokuveza indlela kuqashelwe amandla edonsa iphayiphi. Libuye nemingcele ezibalulekile kukhawulwe obuphelele nokwelulwa imishini.
Hhayi ngaso sonke isikhathi, kodwa ezimweni eziningi kakade ukuxhumana inkonzo izinhlelo, ihlelwe ngokuvumelana lobu buchwepheshe, kungenzeka ukuvuselelwa kanye ukulungisa ngaphandle kokuba ukudala emseleni ofanayo. Ngaphezu kwalokho, ezimweni komhlaba okusezingeni eliphezulu asikho isidingo sokuba Ukususwa, okuyinto yandisa kwenkululeko HDD. Ovundlile imishini ohlangothini, njengoba kuphawulwe ngenhla, kudinga ukusetshenziswa ubuchwepheshe eyinkimbinkimbi ngaphezulu, kodwa ngokuya inhlangano Logistics ingenye yezindlela ezingabizi kakhulu ukwakha imithombo.
Njengoba isingeniso emkhakheni ukwakhiwa kanye ekukhiqizeni yezimboni izixazululo ezintsha zobuchwepheshe, abasebenzisi ekupheleni uthole okuningi izinzuzo. Nokho, kukhona amanani okukhuphuka ukusetshenziswa amasu esimanje nezindlela yesimanje, phakathi lapho HDD. imishini yobuchwepheshe, kuleli cala, ziwumthwalo umthwalo kakhulu le abasebenzi. Ingozi ngokuhamba umsebenzi nale, kodwa, isibonelo, isiteshi kungaholela ngokuwa umonakalo omkhulu. Ngenxa yalesi sizathu, Abenzi imishini imishini kanye nobuchwepheshe kuyinto ikakhulukazi agcizelele ukubaluleka kokubonisa siqhuba isifundo sokuqala isimo sezwe nomhlabathi izici.
Le ndiza "Phantom" (Mcdonnell Douglas F-4 Phantom II): incazelo, imininingwane, izithombe
Industrial amafriji: ukubuyekezwa, izincazelo, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza
Kungani umkhumbi akazange ukucwila: Physics e
JSC "Ilyushin Aviation Inxanxathela yaqanjwa SV", eMoscow
Yekuchumana mayelana nendlela ukukhubaza software unqulo wesi arab AVG
"Mercedes" Spinner "": ezibekiweko lobuchwepheshe, ukuhleleka okuhle, izibuyekezo nezithombe
"IGaleli": injini injector. Izinzuzo nokuziqhenya, izici zobuchwepheshe ze-injector
Igor Bochkin - umlingisi, othanda ukuba kumnandi. Biography, Filmography, empilweni yakho
Blitz-belungiselela amaholide ehlobo kanye nenkathi yonyaka kwakunethonya ebhishi
Lokho kungcono ukuvula: LLC noma IP? Izinzuzo nezingozi nebubi ka-IP LLC. Umehluko phakathi SP futhi OOO
I-goiter yama-colloid: izimpawu, ukwelashwa
Estrus e amakati lapho ukulinda wakhe futhi yini okufanele uyenze
Skype akusebenzi: Izinkinga kanye nezixazululo
Amaqiniso nge-Aeroflot. Ubani ophethe i-Aeroflot?
Eqolo ncwadi emhlabeni
"Chkalovets" ekamu. iholide emakamu Wezingane. ikamu Wezingane "Chkalovets", Novosibirsk